Wixii I helaan La Yaabay! Shaw Caawa Waa Lay Cimaamadi Lahaa!. |
Wixii I helaan La Yaabay! Shaw Caawa Waa Lay Cimaamadi Lahaa!.
Sanadkan bishii Siddeeddaad sii dhukusaaya bilawgiisi, oo ku aaddan badhtamihii Jannaayo, intan is xariifiyay saw maan Xaawalayda eddooyinka Ii ah ee Dalka taladiisa wax ku leh Laba ka mid ah galab u raacin Madaxtooyada. Kolkii aanu galnay Madaxtooyadaba saw na looma sheegin in Odaygi mashquulsan yahay oo wafdi habaar qabaa la joogaan. Haddaanay habaar qabin maxaa ku soo beegay maalintaan Wanka weyn loogan lahaa!
Suudhkii berigii aan guursanaayay an iibsadaybaan ku jookhnaa. Bushqad waraaqo ah Oo Shahaadooyinkaygii iyo warbixin mug leh Oo ku saabsan heerka aqooneed ee aan joogo ayaan walwaalaayay. Waxan lahaa eeggaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda ama Waxbarashada ka soo dhamayso Madaxweynaha.
Kol haddaanu joogin aynu Marwada marno saw imay odhan Eddooyinkaygii Fariidada ahaa. In kasta oo aan Madaxweynaha ku calool samaa, haddana Eddo Heblaayo in aan saaka waajaho dan baa tidhi. Oo eddo maxaynu Marwada ka doonnaa? Miyaynu soo bariidinaa saw ku maan odhan. Mid Ka mid ah Eddooyinkayga cajiibka ahi saw intay si adag Ii soo eegtay imay odhan “Waar dee Salaadda waa loo weyso qaataa”. Markii hore ma aan fahansanayn Ujeedada hadalkeeda. Kolkii se aan iridda xafiiska Marwada Koowaad marayno ayaa aan Salaaddii iyo weysadii Islaantu Ii sheegaysay aan fahmay. Shaw Xaafad aan ogahay Madaxweynaha uma galaan ilaa ay Marwada sii maraan.
Waxba nin Og ma ahaynee, bacda Salaan iyo isbarasho Guud.Ku teba mid Ka mid ah Labadaydii eddo ” Dee inanku waa inankii aan Marwo kuu sheegaayay ee Ina Cali Cabaade Weyd. Waa nin Mutacalin ah Oo Sharciga Masters Degree Ka Sita, Saddex sanadoodna Agaasime Waaxeed buu halka Fadxiya ka ahaa, oo dee iyadaad waraysane waa nin hawl kar ah Oo aad iyo aad u maskax fiican, Sidaa awgeed in uu dalaco Oo Agaasime Guud noqdo wuu u qalmaa ee bal warayso Oo Wasaaradda uu ku habboon yahay innaga gee”.
Waan yaabbanahay annigu Oo marna waxan is idhaa Iska giiji waa jaanisee. Marna waxa qalbiga igaga soo dhaca ‘Jaw! ma Islaantanaad suudhka u soo xidhatay Oo ku magacaabaysa waa yaabe’.
Dabaddeedna anniga iyo eddo Fariido waxa na dhex maray.
Marwadii: Mansha Allah eddo! Eddo warkaaga Waan hayay Oo Heblaaya iiga kaa sheekaysay. Hambalyo eddo. Nin weynbaan ku moodaayay ee shaw nin yarbaad tahay. Ninka waxaas Oo war ah layga keenay dee maan Moodayn ninkaagan yar. Eddo Sharcigaad baratay saw ma ahayn?
Anniga: Haa eddo Sharcigaan bartay.
Marwadii: Eddo markaa Maxaad doonaysay Dee iminkaba shaqaale Dawladeedbaad ahaydee, Maxaad rabtaa?
Anniga: Anniga Oo yaabban baan ku idhi, In aan Agaasimaha Guud ee Cadaaladda ama Waxbarashada noqdaan yara jeclaystay haddii ay suura-gal tahay Oo aan jaaniskaa helo.
Marwadii. Good! Waad fiican tahay Eddo, ee saw ma ogid in Dalkeena Clan Politics jiro.
Anniga: Anniga Oo Ka yaabban waxa ay soo wadato ayaan Madax luxay.
Marwadii: Waan Ka xumahay eddo inan yar Oo si fiican wax u bartaybaad tahay Oo halkan CVgaaga ayaa ay Ka muuqataa xilligan se suura-gal ma aha in aad Agaasime Guud noqotaa, sababta oo ah bil Ka hor waxa Agaasime Guud loo Magacaabay Saleebaan oo xaafadeena ah. Saw ma ogid in Subeer Awal Siddeed Agaasime Guud leeyahay? Iyo Lix Wasiir iyo weliba dheeraad?
Anniga: Haa Eddo, haa! Waxay leeyihiina wax nagama saarna Anniga Oo hoosta Ka le.
Marwadii: Mida kale nin yar baad tahay waa ” Early Achievement in aad DG noqotaa Oo Adiga kuuma fiicna eddo ee maad Iska daysid”
Anniga: Markay intaa tidhi ayaan si aan hurdo Ka soo kacay soo hambabaray Oo ku idhi ” ma nin yar baan kuula eekaaday, Soddonkii sanadbaa iiga hadhay, Mida kale Axmed-siilaanyoba kolkii uu DG-ga ahaa Soddon jir wuu Ka yaraa, Mastersna wuu sitay ee Horta taa oggow, Anniguna Waan u diyaarsanahay shaqadaas, khibrad Dawladeedna Waan leeyahay. Agaasinkana Dee innagu dad ba’aybaynu nahee qabiil laguma xulo Oo waa Teqnuecrates, Oo dad Mutacalin ah baa la keena ee Reer iyo qabiil toona laguma xulo. Haddii caqabada Keli ah ee Ii diidaysa in aan Agaasime Guud noqda tahay Xaafad iyo hebel Oo aanu isku Xaafad nahay Oo jooga meesha, Dee waa niyad jab inteeda le’eg mana aqbali karo, daniba se way odhan” Iminkana uma darbani ee kolkii horeba shaqo la’aani ima hayn ee Galdaloolooyin aan Labadaa Wasaaradood ku arkaayobaan wax Ka gufee lahaa!
Marwadii: Eddo ha xanaaqin ee Waaqaca Dalkeena yaalla ayaa sidaasa. Waan jecelahay eddo in aad dalkaaga u shaqayso walaahi. Waxad se yeelaysaa waxba kuu waayi maayo ee La Taliyaha Sharciga ee Wasiirka Madaxtooyada iminka qaado, sanadkani intaanu dhammaanna Meel uun baanu ku geyn eddo ee hayga xanaaqin.
Anniga: Inkasta Oo aan yaabbana, haddana Islaanta hadalkeedu wuu Ii dhaadhacay, waayahaybaan dooddii ku af-meeray.
Anniga Oo sidii neef xoolo ah Muqlaysan ayaan Ka soo baxay Madaxyooyadii.
Dib uguma noqon Madaxtooyadii. Shaqadii lay carrabaabayna maan doonan ee shaqadaydii ayaan Iska watay. Bil Ka dibna Dalkiiba waan Ka soo baxay. Oo hawlo shaqsi ah ayaan uga tegay Dalka.
Waxa se dhacdadan I xasuusiyay, Magaacabista iyo Xil-Ka-qaadista faraha badan ee ay Caawa Madaxtooyadu samaysay. Shaw Annigana Caawa Waa lay Cimaamadi Lahaa!
Qalinkii: Maxamed Cali Ruush (Shaafici)